Salamo 113 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865]
[Fiderana an'Andriamanitra lehibe, Izay manandratra ny malahelo] Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon'i Jehovah, Miderà ny anaran'i Jehovah.
&nbspIsaorana anie ny anaran'i Jehovah Hatramin'izao ka ho mandrakizay.
&nbspHatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany No hoderaina anie ny anaran'i Jehovah.
&nbspAvo ambonin'ny jentilisa Jehovah; Ambonin'ny lanitra ny voninahiny.
&nbspIza no tahaka an'i Jehovah Andriamanitsika, Izay mipetraka any amin'ny avo,
&nbspNefa miondrika mijery Ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany?
&nbspManangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka Izy Ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika,
&nbspMba hametraka azy ho naman'ny mpanapaka ny olony.Mampitoetra tsara ny momba Izy, Fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia.
&nbspMampitoetra tsara ny momba Izy, Fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia.